(Sverige och språk)
Maanta Iswiidhan way ka luqado badan tahay berigii hore. Marka laga tago af Iswiidhishka, waxa aynu leennahay luqado dadka laga tirada badan yahay ku hadlaan sida afka dhagoolayaasha iyo luqado kale oo badan. Sidoo kale waxa meelaha qaarkood laga isticmaalaa af ingiriisiga. Sidaas darteed, waxaan u baahan nahay sharci-luqadeed oo dejiya maqaamka luqadda ee bulshada.
Af iswiidhishku waa luqadda ay ku hadlaan dadka ugu badan Iswiidhan, si af hooyo ama si luqad labaad. Xeerka Luqadaha waxa uu dhigayaa in af iswiidishku yahay luqadda koowaad ee Iswiidhan. Taas macnaheedu waxa weeye in af iswiidishku yahay luqadda ka dhaxaysa umadda waddankan Iswiidhan deggan. Waxa loo isticmaali karaa dhammaan qaybaha bulshada oo dhan, sida xidhiidhka u dhexeeya qofka iyo xafiisyada dawladda. Waxaa jira luuqado kale oo muddo dheer ka jiray Iswiidhan oo loo arko in ay ka tirsan yihiin dhaxalka Iswiidhan, oo afka iswiidhishka ka sokow ah: Finnishka, Yidish, me’enkieli, Roma iyo Sami. Luqadahan sida go’aanka baarlamaanku qoray waa luuqadaha qaranka ee dadka laga tirada badan yahay.
Afka dhagoolayaasha ee iswiidhishka waxa isticmaala dadka dhego culus, dhego la’ iyo ehelkooda. Waa afkan hore baarlamanka looga aqoonsaday in uu la mid yahay luuqadaha qaranka ee dadka laga tirada badan yahay.
Waxa kale oo jira dhammaan luqadaha afka hooyo ee dadka asal ahaan ajaanibka ahi ay leeyihiin. Xeerka luqadaha waxa ku qoran in qof kasta la siiyo fursad uu ku barto af Iswiidhishka, laakiin qof kasta oo leh af hooyo oo aan ahayn Iswiidhishka in sidoo kale la siiyo fursad ay ku kobciyaan oo ay ku isticmaalaan luqaddooda hooyo.
Adeegyada Turjumaanka ee gobolka Stockholm
(Tolktjänster i Stockholms län)
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo warbixin uu fahmi karo. Dadka aan luqadda iswiidhishka ku fiicnayn waxay xaq u leeyihiin in ay helaan turjumaan marka ay u baahdaan daryeel caafimaad ama ka ilkaha ama in ay la xidhiidhaan xafiisyada dawladda iyo degmooyinka. Adeeggani waa bilaash, turjumaankana waxa lagu dhaariyay in uu xejiyo siraha. Adeegyada Turjumaanka ee laga heli karo gobolka Stockholm waa:
Turjumaanka dadka dhego culus, dhego la’ ama dhego iyo indho-la’
Marka ay xarunta Turjumaanku xidhan tahay ee aad degdeg ugu baahan tahay turjumaan si aad ula xidhiidhid daryeelka caafimaadka, adeegyada bulshada ama booliska, fadlan la soo hadal labmarka Hagaha Daryeelka (Vårdguiden ) 1177 adiga oo taabanaya lambar 3 markaad 1177 dirtid. Haddii aad leedahay telefoonka qoraalka waxaad soo maraysaa xarunta telefoonka qoraalka (texttelefonförmedlingen) telefoon lambarka 020-600 600.